Nyochaa aha gị n'ịntanetị site na iji TRACKUR | Blog MarTech
N'ụwa taa, enweghị ụlọ ọrụ nwere nnukwu ọnụnọ n'ịntanetị nke nwere ike ileghara ịdebe weebụ maka aha ọma. N'oge nke ịsọ mpi akpịrị na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa, naanị ụlọ ọrụ ndị na-eleba anya na mgbasa ozi mmekọrịta na ọwa weebụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ iji ghọta ihe ndị ahịa na-eche banyere ha, ma zaghachi n'ụzọ dabara adaba, nwee ohere nke ịkwalite iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa, yana site na mgbakwunye ndọtị.
Trackur awade a ngwọta na-eme ka gị online aha nlekota mfe na ọnụ.
Iji jiri Trackur, tinye ntinye okwu ọchụchọ achọrọ, nke nwere ike ịbụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ aha aha, Trackur na-enyochakwa mgbasa ozi ụwa niile, blọọgụ, ọwa vidiyo, saịtị akụkọ na ndị ọzọ iji depụta ebe ọ bụla ahịrịokwu ahụ. Trackur na-echekwa ọchụchọ ahụ ma debe egwu nke mmelite na-eme na njikọta na isiokwu ọchụchọ na weebụsaịtị ndị edepụtara, na-enye gị ohere nyochaa ọsọ ọsọ nke ịkpọtụrụ oge. Enwere ike ibudata nsonaazụ na Excel, ma ọ bụ gụọ site na ndepụta RSS.
Trackur na-enye gị ohere ịkọwapụta nlekota aha gị site na nzacha ndị nwere uche nke na-enye ohere ịkụ ala ruo obere nyocha ọchụchọ. Enwekwara nhọrọ iji tinye ihe nzacha na-adịghị mma, ewepu ihe ụfọdụ akọwapụtara na ndepụta ọchụchọ. Nakwa, Trackur gụnyere ikikere InfluenceRank dashboard yabụ ị nwere ike ịmata kpọmkwem onye na-ekwu maka gị yana mmetụta mmetụta ahụ nwere ike ịbụ.
Gịnị kpatara Trackur? Ihe karịrị ndị ọrụ 45,000 + tụkwasịrị obi na Trackur iji nyochaa 10+ nde mgbasa ozi kwuru banyere otu ụbọchị gafee ihe karịrị 100+ nde saịtị saịtị, blọọgụ, forums, Twitter, Google+ na Facebook! Ha na-enweta nsonaazụ ziri ezi, ngwá ọrụ dị ike, na enweghị nkwekọrịta ogologo oge.
Trackur nwere atụmatụ efu, nke na-abịa n’enweghị nchịkọta ma ọ bụ eserese, na-enye ohere naanị otu nchọta echekwara, na-egbochi nsonaazụ na ntinye 100 kachasị nso nso, ma wepu Facebook na Forums na nlekota. Atụmatụ niile a kwụrụ ụgwọ na-enyocha usoro niile nke mgbasa ozi mmekọrịta yana ọwa ndị ọzọ dị mkpa, ma na-akwado ike nke mkpesa Trackur. Maka ụlọ ọrụ, a na-enweta ihe ngwọta dị oke ọnụ ahịa na-acha ọcha na-acha odo odo.
Ọhụrụ nsụgharị nke Trackur ka budata mma ọrụ interface na e kachasị ma mbadamba na mobile ojiji. Na… ebe ọ bụ na ihe niile ngwa na-tọrọ ntọala site na Andy Beal… Ị nwere ike ịtụkwasị obi na ọ ga-anọgide na-abụ ngwa ọrụ dị mfe, dị ike nke ndị ahịa nwere ike ịkwalite!
Tags: andy bianjikwa ahanlekota oruelekọta mmadụ medianlekota oru mgbasa ozionye na -eso ụzọ
Social Media Olee otú-Iji Kit
Jun 26, 2012 na 2: 00 PM
Daalụ maka nnukwu ide ihe, Douglas! Anyị enweghị ike ikwu ya karịa anyị ourselves
Director nke Community Relations
Nov 15, 2013 na 6:10 AM
Na-akpali nnọọ mmasị! Daalụ!